Covid-19 oo si weyn ugu faafayo Gobolada Soomaalida ku badan tahay ee Mareykanka | Xaysimo
Home War Covid-19 oo si weyn ugu faafayo Gobolada Soomaalida ku badan tahay ee...
Covid-19 oo si weyn ugu faafayo Gobolada Soomaalida ku badan tahay ee Mareykanka
Xaalada Mareykanka ee cudurka Covid 19 ayaa sii xumaanaya, islamarkaasna abuurtay tuhun kala dhexgala madaxda dowlada dhexe, tan gobollada iyo dowladaha hoose.
Dhanka dhaqaalaha, suuqyada ganacsiga ee Mareykanka ayaa dhurbaaxo weyn kala kulmey cudurkan. dhaqaaloyahanada ayaa odorosaya in aysan soo kabashada qasaaraha suuqyada ganacsiga ee ka dhashey Covid 19 aan mardhow laga kaban doonin,
Madaxda dowladaha hoose iyo gobollada oo dhaliilayo habdhaqanka dowlada dhexe ayaa sii kordhaya. Haweenayda gudoomiyaha ka ah Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada sadexaad ee ugu weyn Mareykanka, ayaa tiri, “waxaan shaki ka qabaa kaydka dowlada dhexe ee agabka ay ugu talagashey masiibooyinka”.
Lori Lightfoot oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri, “majiro maamul wax ka dalbadey dowlada dhexe oo jawaab waafi ah ka helay”.
Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo oo kol hore go’aansadey in ay iyagu qabtaan waxyaabo badan oo dowlada dhexe laga rabey, ka dib markii ay ka waayeen heerkii ay ka rabeen, ayaa hab dhaqanka madaxweyne Donald Trump ku sheegay mid aan kii Mareykanka ahayn.